MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » 2011 » november
Dhakhtarkii heesaagii caanka ahaa ee Micheal Jackson oo 4 sanno lagu xukumay
Maxkamadda ku taala dalka Maraykanka ayaa 4 sanno oo xabsi ah ku xukuntay dhakhtarkii hore ee heesaagii caanka ahaa, Micheal Jackson daawayn jiray, DR. Conrad Murray. Waxaa lagu soo eedeeyey in uu siiyey dawo badan (overdos). Maxkamadan oo in muddo ah socodtay ayaa shalay la soo gebagabeeyey. Heesaagaa caanka ahaa oo gurigiisa markii uu xanuusaday […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Canbaarayn budhcad maqaaleed (article pirates) Plagiat
Canbaarayn budhcad maqaaleed (article pirates) Plagiat Waxa hubaal ah in aydun in badan maqasheen oo dhagihiina ka bateen budhcad badeed. Haddaba waxaa beryahan soo baxay qolo kale oo la magac baxday budhcad maqaaleed. Bahda ama maamulka caafimaadka.com waxa aanu halkan ka canbaareynaynaa dad bililiqaytsa maqaalada aanu ku soo daabacno mareegta caafimaadka ee aanu soo saarno. […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Isticmaalka badan ee kiniinka xanuun jebiyaha Paracetamol oo dhimasho qofka u keeni kara
Sida aynu la wada socono haddii uu qofku qaato ama aad u isticmaalo dawo ama kiniino in ka badan xadigii loogu talo galay (overdos) waxa ay badanaa xaga caafimaadka u keentaa dhibaato weyn oo halisa. Cilmi-baadhayaal xaga caafimaadka, oo u dhashay dalka Ingiriiska, ayaa daraasadii ay sameeyeen waxay natiijadii noqodtay. Haddii uu qofku isticmaalo xanuun […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Daawo video-gan qaliinka indhaha ee dhakhtarka Burco
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Dhawr nooc oo bariiska aynu cuno ka mida oo ay ku badan tahay maado kiimiko ah oo taranka wax u dhimaysa
Dadka dunnida ku nool ayaa badanaa bariisku u yahay cuntada muhiimka ah ee ay cunaan maalin walba, dadkaas waxaa ka mid dadka soomaalida oo maalin walba cuna bariiska. Haddaba waxaa jirta marka la beerayo bariiska in lagu shubo maadooyin kiimiko ah oo loo isticmaalo siyaabooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin in si degdeg […]
· admin	· 4 Comments Posted in: Maqaalo	Dadka Ku Nool Caasimada Dalka Indoonisiya Ee Jakarta Oo Lagu Soo Waramay In 80% Ay Qabaan Xanuunka Loo Yaqaano Hepatitis A.‏
(Hadhwanaagnews) Sunday, November 13, 2011 Jakarta- (HWN)- Wararka ka imanaya khubarada dhinaca caafimaadka ku talaxtagay ayaa daboolka ka qaaday in 80% dadweynaha aadka u tirada badan ee ku nool caasimada dalka Indonisia ee Jakarta
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Qiso Cajiiba/la yaab leh oo dunnida hore uga dhicin qofkii ugu horreeyey ee jidhkiisa la qalajiyo (mummy)
Qiso Cajiiba oo dunida hore uga dhicin qofkii ugu horeeyey ee jidhkiisa la qalajiyo (mummy) Qiso Cajiiba oo aan hore dunnida casriga uga dhicin http://www.youtube.com/watch?v=cP2YQ36T9ao
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Ciid wanaagsan (Ciid-ul-Carafa)
Asalaamu Calaykum Waxa aanu hambalyo ciida u soo gudbinaynaa dhammaan dadka muslimiinta ee beri haddii Eebe idmo dunida oo dhan ka ciidaysa. Waxa aanu si gaara leenayahay ku ciida. Ciid wanaagsan, akhristayaashayada qiimaha iyo qaayaha leh ee arrimaha caafimaadka kala socda mareegtan caafimaadka.com
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Dufcadii Koowaad ee ka Qalin jabisa Jaamacadda Addis Ababa Medical College oo Maanta Xaflad Balaadhan loogu Qabtay Hargeisa.
Ardeyda qaybta caafimaadka ka barata Jaamacadda caafimaada ee ku taala magaalada Hargeysa, Addis Ababa Medical College ayaa maanta ka qalin jabiyey jaamacadaas. GNS)-Dufcadii koowaad ee ka qalin jabisa Jaamacadda Addis Ababa Medical College ee Magaalada Hargeisa ayaa Maanta Xaflad balaadhan loogu qabtay Hotel Crown ee Magaalada Hargeisa. Munaasabada Qalinjabinta Ardayda ayaa waxaa ka soo qayb […]